သတိပေးပြီ!!! ထိုင်းနိုင်ငံမြို့နယ်ပေါင်း ၃၀ ကျော် မိုးကြီးမည် – Myanmar Live
၂၀၁၉ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်နေ့ မိုးလေ၀သဦးစီးဌာနမှ ၂၄ နာရီစာ မိုးလေ၀သ ထုတ်ပြန်ချက်အရ ထိုင်းနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း၊ အောက်ပိုင်း၊ မြောက်ပိုင်း၊ အရှေ့မြောက်ပိုင်း၊ တို့၌မနက်ပိုင်းတွေရာသီဥတုအေးပြီး မိုးကြီးလေ ကြီး ဖြစ်ကာ ထိုင်းနိုင်ငံအထက်ပိုင်းမှာတော့ ရာသီဥတုပူပြင်းမည်ဟုသိရသည်။
လက်ရှိမိုးလေ၀သအခြေအနေအရ လေဖိအားနိမ့်နေပြီး တရုတ်နိုင်ငံ၏ လေဖိအားမြင့်မားမှုတို့သည် လာအို နိုင်ငံအား ဖုံးဖိထားခြင်းတို့ကြောင့် ထိုင်းနိုင်ငံ၏အရှေ့မြောက်အရပ်တို့နှင့် တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်တို့၌ ယနေ့ (၂၀၁၉ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅) ရက်နေ့တွင် တိမ်များစုပြီး မိုးကြီးလေကြီးနိုင်ပြီး အနောက်အရပ်မှ မြောက်အရပ် သို့ တိုက်ခတ်လာသည့် လေတိုက်ခတ်နှုန်းတို့ကြောင့် ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းတွင် မနက်ပိုင်းအချိန်၌ ရာသီဥတုအေးပြီး အောင်ထိုင်းပင်လယ်ပြင်မှတိုက်ခတ်လာသော လေတိုက်ခတ်နှုန်းတို့ကြောင့် ထိုင်းနိုင်ငံ တောင်ပိုင်းတွင်လည်း ရာသီဥတုအေးနိုင်သည်။
ယနေ့မနက် ၆ နာရီ မှ ၂၀၁၉ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၆ ရက်နေ့ မနက် ၆ နာရီအထိ ထိုင်းနိုင်ငံမိုးလေ၀သခန့်မှန်းချက်
ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းတွင် မနက်ပိုင်း ရာသီဥတုအေးပြီး နေ့လည်တွင်တော့ ဖိစနုလို့(ခ်)၊ ဖိကျစ်၊ ဖစ်ချဘွန်၊ တို့တွင် ရာသီဥတုပူပြင်းမည် ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းမိုးထစ်ချုန်းရွာသွန်းနိုင်ပြီး အနိမ့်ဆုံးအပူချိန် ၁၅-၂၂ ဒီကရီစဲလ်ဆီး ယက် ကျဆင်းနိုင်ပြီး အမြင့်ဆုံးအပူချိန် အနေနဲ့ ၃၃-၃၈ ဒီကရီစဲလ်ဆီးယက် အထိမြင့်တက်နိုင်သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ အရှေ့တောင်အရပ် အူဘွန်ရက်ချဌာနီ၊ ခွန်ကန်၊ နောင်ဘွားလမ်ဖူး၊ စကွန်နခွန်၊ နခွန်ရက်ချစီမာ၊ ဘူရီရမ်၊ စီစကစ်၊ အူဒွန်ဌာနီ၊ တို့တွင် ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း မိုးထစ်ချုန်းရွာသွန်းနိုင်ပြီး တချို့နေရာတို့တွင် လေတိုက် အားပြင်းမည်ဖြစ်သည် အနိမ့်ဆုံးအပူချိန် ၁၉-၂၅ ဒီကရီစဲလ်ဆီးယက် ကျဆင်းနိုင်ပြီး အမြင့်ဆုံးအပူချိန်အနေနဲ့ ၃၅- ၃၈ အထိမြင့်တက်နိုင်သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းတွင်တော့ နခွန်စ၀မ်၊ ချိုင်ယနက်၊ လုပ်(ဖ်)ဘူရီ၊ စရဘုရီ တို့တွင် ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း မိုးထစ်ချုန်း ရွာသွန်း နိုင်ပြီး အနိမ့်ဆုံးအပူချိန် ၂၄-၂၅ ဒီကရီစဲလ်ဆီးယက် ကျဆင်းနိုင်ပြီး အမြင့်ဆုံးအပူချိန် အနေနဲ့ ၃၆- ၃၉ အထိမြင့်တက်နိုင်သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံအရှေ့အရပ်တွင် နေ့လည်ပိုင်းတို့တွင် အပူချိန်မြင့်တက်ပြီး ပရာကျင်ဘူရီ၊ စရကဲ့ယောက်၊ ချွန်ဘူရီ၊ ရယောင်း၊ ကျန်ထဘူရီ၊ သရက် တို့တွင် ၂၀ ရာထိုင်နှုန်း မိုးထစ်ချုန်းရွာသွန်းနိုင်ပြီး အနိမ့်ဆုံးအပူချိန် ၂၄-၂၆ ဒီကရီစဲလ်ဆီးယက် ကျဆင်းနိုင်၍ အမြင့်ဆုံးအပူချိန်အနေနဲ့ ၃၃- ၃၈ အထိမြင့်တက်နိုင်ပြီး ပင်လယ်ရေ ၃ ဒသမ ၂ ပေအထိမြင့်တက်နိုင်သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းတွင် တိမ်ထူထပ်ပြီး ပရကျွပ်ခီရိခန်၊ ချွန်ဖော်၊ စူရက်ဌာနီ တို့တွင် ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းမိုးထစ်ချုန်း ရွာသွန်း နိုင်ပြီး အနိမ့်ဆုံးအပူချိန် ၂၂-၂၅ ဒီကရီစဲလ်ဆီးယက် ကျဆင်းနိုင်ပြီး အမြင့်ဆုံးအပူချိန်အနေနဲ့ ၃၂- ၃၅ အထိမြင့်တက်နိုင်၍ ပင်လယ်ရေ ၃ ဒသမ ၂ ပေ အထိမြင့်တက်နိုင်ပြီး မိုးရွာသွန်းသည့်နေရာများတွင် ၅ – ၆ ပေအထိ ပင်လယ်ရေမြင့်တက်နိုင်သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းတွင် တိမ်ထူထပ်ပြီး ဖန်ငါ၊ ကရဘီ၊ တို့တွင် ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းမိုးထစ်ချုန်းရွာနိုင်ပြီး အနိမ့်ဆုံးအပူချိန် ၂၂-၂၅ ဒီကရီစဲလ်ဆီးယက် ကျဆင်းနိုင်ပြီး အမြင့်ဆုံးအပူချိန်အနေနဲ့ ၃၅- ၃၇ အထိမြင့်တက်နိုင်သည်။
ဘန်ကောက်နှင့်အနီးအ၀ိုက်တွင်တော့ နေ့လည်ပိုင်းတွင်အပူချိန်မြင့်မားပြီး ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းမိုးထစ်ချုန်း ရွာသွန်းနိုင်သည် အနိမ့်ဆုံးအပူချိန် ၂၅-၂၇ ဒီကရီစဲလ်ဆီးယက် ကျဆင်းနိုင်ပြီး အမြင့်ဆုံးအပူချိန်အနေနဲ့ ၃၄- ၃၇ အထိမြင့်တက်နိုင်သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံအထက်ပိုင်းတွင် မိုးကြီး၍ မုန်တိုင်းအနည်းငယ်ဖြစ်ပေါ်စေသောကြောင့် သစ်ပင်ကြီးများ၊ အဆောက်အအုံများ၊ ဆောက်လက်စတိုက်များ၊ မခိုင်ခသည့် နေရာများအောက်တွင် လေကြီးမိုးကြီး အချိန်တွင်မနေကြရန်ကိုသတိပေးလိုက်ရပါသည်။
အချက်အလက်များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည် :: KaiJeaw.(Online).
TaggedMyanmarMyanmar live newsMyanmar newsNews
Previous Article တစ်ပတ်တာဟောစာတမ်း ၂၅ ဖေဖော်ဝါရီ – ၃ မတ် ၂၀၁၉
Next Article ထိုင်းအလုပ်သမားဝန်ကြီးမှ မီးစိမ်းပေးပြီ!!!